ओली सरकारले जनतामाथि गरेको प्रमुख १३ विश्वासघात | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठकमा पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओली सरकारले जनतामाथि मुख्य १३ विश्वासघात गरेको आरोप छ । सो प्रतिवेदनको अंशः
संविधान जारी भएपछि २०७२ असोज २४ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सत्तामा आइसकेपछि उनले काम केही नगरे पनि सुरु–सुरुमा अब त केही होला कि, भनेर ठूलो आश देखाए ।
तर उनले ९ महिनामा भूकम्पपीडितका लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने, त्यसमा आफ्नो पार्टीको कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, पार्टी निकट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न आयोगहरू, राजदुत र न्यायाधीशमा नियुक्ती गर्ने, रानीपोखरी र बुङमतिमा पुनःनिर्माणको शिलान्यास गर्ने, वित्तिय अनुशासन मिचेर बजेट ल्याउने, जम्बो टिम लिएर विदेश भ्रमण गर्नेभन्दा केही गरेनन् ।
एउटा वर्षायाम सकेर अर्को वर्षायाम सुरु भइसक्दा पनि भूकम्पपीडित जनता पानीमा रुझेर रात काट्न बाध्य छन् । उनीहरूका आँखा ओभाएका छैनन् । तर सरकारले विपत्तिमा सरकार पीडितसँगै छ भन्ने आभाष समेत दिन सकेन । उनको पालामा पहिलाका सरकारले निर्णय गरेर पाइपलाइनमा भएका बाहेक कुनै नयाँ काम हुन सकेन ।
उनी पीडित समुदायको पहिचानको विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उत्रिए । संक्षिप्तमा सरकार बन्नुभन्दा अगाडि र पछाडि उनले जनतामाथि गरेका विश्वासघातलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
१ संविधान निर्माणमा प्रतिगमन
उनी देशमा परिवर्तन, अग्रमन र रुपान्तरणको विरुद्धमा अनवरत विरोधमा उत्रिए । संविधान निर्माणको बेला प्रतिगामी विचारको पक्षपोषण गर्नेमा उनी एक नम्बरमा थिए । देशमा राज्यको पुनःसंरचना, संघीय संरचना निर्माण, प्रदेशहरूको सीमांकन तथा अधिकार क्षेत्रका बाँडफाँटको विषयमा गम्भीर विवाद रहेको छ । तर उनी त्यसको कुनै निकास नदिइ छिटो संविधान बनाएर प्रधानमन्त्री हुने हतारोमा लागे ।
२ आन्दोलनमा राज्य आतंक
प्रतिगमनको विरुद्ध सुरु भएको वर्तमान शान्तिपूर्ण जनअवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलनमा सरकारको तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी हत्या, दमन र नरसंहार गरे । राज्य आतंक मच्याए । हजारौ व्यक्तिहरू अंगभंग र घाइते भए । तराई मधेस र थरुहटमा करिब ५ दर्जन आन्दोलनकारीहरू सहिद भए । कैलालीको टीकापुर, सुनसरीको इटहरी, सर्लाहीको नवलपुर, मोरङको रंगेली, सिरहाको लाहान लगायत देशका विभिन्न भागहरूमा सरकारद्वारा पालित भिजिलान्तेहरू प्रयोग गरे ।
३ अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई भ्रमित गर्ने षडयन्त्र
उनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई झुक्याउन वार्ता र संविधान संशोधनको नाटक गरे । आदिवासी जनजाति, थारु खस, शिल्पी (दलित), मुस्लिम सम्बद्ध संघर्ष समितिहरूले राखेका माग बेवास्ता गरे ।
४ स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने षडयन्त्र
प्रतिगामी संविधानविरुद्ध संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा सडक र सदनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू तथा शक्तिहरू आन्दोलित छन् । सरकारले यसको कुनै सुनुवाइ नगरी आफ्नो पहिचानविरोधी कार्यलाई अझै अगाडि बढाउन राज्यपुनःसंरचनाको कुरो टुंगो नलाग्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने षडयन्त्र गर्दैछ ।
५ भूकम्पीडितमाथि खेलवाड
२०७२ वैशाख १२ गते भएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपश्चातको लगातारको पराकम्पनहरूबाट उत्पन्न राष्ट्रिय विपत्तिमा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसे । भूकम्पपीडितले खान र लाउन समेत नपाएको बेला पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई करोडौ रुपैयाँ लाग्ने गरी विनाकानुन सुविधा दिए । आफ्ना निकट एनजीओहरूलाई मात्रै काम दिए । यो भेदभाव, असमानता, लापरबाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारको नमूना हो ।
६ सरकार टिकाउन जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि अग्रसर
देश संघीयतातर्फ उन्मूख भएको बेला वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत सरकार टिकाउने नाममा ६ जना उपप्रधानमन्त्रीसहित ४० जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरे । देशलाई अरबौ रुपैयाँ भार पर्ने गरी मन्त्रालय फुटाउँदै नयाँ नयाँ मन्त्रालयहरू थपे ।
७ पहिचानको आन्दोलन भारतसँग जोड्ने प्रयास
उनले नेपालमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पीलगायत सबै उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनलाई भारतसँग जोड्ने कुटनीतिक वालापन देखाए ।
सरकारले आजको परस्पर निर्भर विश्वमा दुुई छिमेकी मुलुकहरूबीचको कुटनीतिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धबाट लाभ लिनुको सट्टा एकको विरोध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने कुटनीतिक अपरिपक्कता प्रदर्शन गरे । सरकारको यस्तो असफल र असन्तुलित नीतिका कारण देशको अन्तर्रा्ष्ट्रिय छबि बिग्रिएको छ ।
८ राष्ट्रवादको नाममा नश्लवाद प्रोत्साहन
सरकारले देशभित्र पनि तथाकथित राष्ट्रवादका नाममा फरक पहिचान र अनुहार भएकाहरूलाई घृणा गर्ने नश्लवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यो राष्ट्रिय एकताको बाधक हो ।
९ राष्ट्रवादको नाममा संघीयताविरुद्ध पनि षडयन्त्र
पहिचन र अधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक रुप दिने प्रयत्न गरे । इन्द्रेको बाबु चन्द्रे आए पनि एक नम्बरको सीमा हेरफेर हुन्न भन्ने र संघीयताविरोधीलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिने उनको चरित्र संघीयतालाई बोकाको टाउकोमा भैसीको सिङ भन्ने कुराले यसको पुष्टि गर्छ ।
१० जनताका दैनिक समस्याप्रति बेवास्ता
देश भोक, रोग र शोकमा डुबिरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुन थालेको छ । जलस्रोतको धनी देशमा सरकारले जनतालाई आफ्नै देशमा उत्पादन हुने बिजुली समेत दिन सकेको छैन । जनता लोडशेडिङको मार खेपिरहेका छन् । भाषणमा रेल, तेल, जहाज र बिजुलीको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा दिनानुदिन समस्याबाट पन्छिने काम भए ।
११ तस्कर र कालाबजारीहरूका लागि स्वर्ग
तराई मधेसमा आमहडताल हुँदा त्यसको बहानामा सरकारले तस्कर तथा कालाबजारीयाहरूलाई प्रोत्साहित गरे । पछिल्लो कालमा देशमा ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको भण्डारण पयाप्त हुँदा–हुँदै कृतिम अभाव सृजना गरिए । तस्कार तथा कालाबजारीयाहरूले नेपालमा समानन्तर अर्थतन्त्र चलाए ।
१२ वार्ताको नाममा मोर्चा र गठबन्धन फुटाउने षडयन्त्र
उनले असहमत पक्षलाई कहिल्यै सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरेनन् । बरु पद र प्रलोभन दिएर एकको विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गरेर संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई फुुटाउने षडयन्त्र गरे । आन्दोलनमै नरहेका चुरे भावर लगायतलाई चिन्ने प्रधानमन्त्रीले संघीय गठबन्धनलाई नचिनेको बहाना समेत गरे ।
१३ मुलुक असफल राष्ट्रको दिशामा
वित्तिय सिद्धान्तहरूलाई उल्लंघन गरी मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे । आफ्नो आएबाट चालू खर्च समेत धान्न नसक्ने बजेट ल्याए ।
प्रकाशित, ८ साउन २०७३
संघीय गठबन्धनद्वारा दैनिक १२ घण्टे ३९ दिने रिले अनसन
US congratulates Bhandari
Posted by admin on Jul 23 2016. Filed under Breaking News, दस्तावेज, दृष्टिकोण. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry
2 Comments for “ओली सरकारले जनतामाथि गरेको प्रमुख १३ विश्वासघात”
July 25, 2016 - 8:24 am
November 18, 2016 - 12:21 am